Chọpụta izu kacha mma izu ụka izu ụka | Akụkọ Njem
Ihunanya izu ụka getaways
Susana Garcia | | Getaways, Getaways Europe, General, Ihunanya
Gbahaa onye gị na ya gbapụ ụbọchị ole ma ole Ọ bụ nnukwu echiche, inwe ike ịnụ ọnụ ọnụ. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ịchọrọ ime, rịba ama ọtụtụ izu ụka ihunanya ị nwere ike ime. Enwere ọtụtụ ebe dị mma ịga dị ka di na nwunye, yana ụfọdụ echiche ndị zuru oke iji mee ka ọkara dị mma anyị.
Si ị chọrọ ụfọdụ echiche iji nweta mmụọ nsọ Mgbe ị na-eme atụmatụ mmekọrịta nke mmekọrịta gị na onye òtù ọlụlụ gị, rịba ama ebe ndị a. Obi abụọ adịghị ya, otu n’ime ha nwere ike zuo oke iji meere gị abụọ ihe ncheta na-agaghị echefu echefu.
1 Etu ị ga - esi họrọ ezumike kacha mma
Etu ị ga - esi họrọ ezumike kacha mma
N'oge soro onye anyị na ya na-emekọ ihe, ihe mbụ anyị kwesịrị ichebara echiche bụ ụdị nke ha abụọ. Enwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ enwere ike ịpụ maka izu ụka, yabụ anyị ga-atụle ụzọ dị iche iche. Enwere ike ịhọrọ n'etiti osimiri na ugwu, ebe ọ bụ na n'ụsọ osimiri anyị nwere ike ịnụ ụtọ ntakịrị anyanwụ na n'ugwu ụbọchị njem. Anyị nwekwara ike ịhọrọ n'etiti njem njem ma ọ bụ nke dị jụụ, na spa. Ọzọ ọzọ bụ ịhọrọ izu ụka n’ime ụlọ dị n’ime ime ma ọ bụ n’obodo. Nhọrọ ndị a niile ga-adabere n'ọtụtụ na ihe abụọ.
Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ gbaga ebe nwere oke osimiri na anwu, anyị nwere ebe dịka Tenerife. Getzọ ezumike a bụ kpochapụwo, ebe ihu igwe na-adịkarị mma n’agwaetiti a. Na mgbakwunye, n'àgwàetiti ị nwere ike ịme njem dị egwu, dị ka nke dị na ugwu nke ndị Refeyim. O kwere omume iji njem ụgbọ mmiri iji hụ dolphins ma gaa na Teide a ma ama site na ụgbọ ala ụgbọ ala iji nwee echiche kachasị mma nke agwaetiti ahụ. Ezigbo ezumike nke na-enye anyị ntakịrị ihe niile.
Obodo nke Venice bụ otu n'ime ebe ịhụnanya kachasị aga njem, ọ bụ ezie na ngwụcha izu nwere ike ịbụ obere oge iji hụ akụkụ niile nke obodo a. Na Venice ọ dị oké mkpa iji jee ije n'ọwa mmiri ya ma hụ ebe dịka Obí Doge ma ọ bụ Ogige St. Mark, na nnukwu ụlọ ụka Senti ya. Ọ bụrụ na anyị agawa dị ka di na nwunye, anyị ga-aga n'okpuru akwa nke ndị hụrụ ya ma gafere ọhụụ ịhụnanya Rialto.
Ọtụtụ n’ime obodo Italiantali zuru oke maka inwe mmekọrịta ịhụnanya, Rome dịkwa ọzọ. N’obodo a, ngwụcha izu dị ka obere oge, mana ọ bụrụ n’ịchọrọ ịpụ, ọ nwere ike ịbụ ebe anwansi. Mee ka a chọrọ na Trevi Fountain, na-eje ije site na nnukwu Colosseum, Vatican, Ogige St. Peter ma ọ bụ Vatican Museum. Ọ bụ obodo nwere amara na-esiri ike ịkọ, zuru oke maka ndị na-enwe obi ụtọ ịgagharị na akụkọ ntolite.
Nke a bụ ihe kachasị mkpa ị ga-enweta njem ịhụnanya. Obodo Paris, ya na obere kọfị, ebe ngosi nka nke Louvre, Champs Elysees na Eiffel Tower Ọ bụ ebe dị mkpa. Otu n'ime ihe ị ga-eme bụ ịrị elu ụlọ elu iji hụ Paris site n'elu, nke ọma mgbe ọchịchịrị gbara. Agaghị echefu Katidral Notre Dame.
Obodo Edinburgh dikwa ezigbo njem. Hụ ụlọ ochie ya, echekwara ya nke ọma, nke nwere echiche dị ukwuu banyere obodo ahụ, bụ otu n'ime atụmatụ ya kachasị mma. O nwekwara ike ịrịgo na mpaghara Arthur Seat, ugwu nke na-enye echiche dị egwu. Ọ bụrụ na ị nwere ike, ị ga-agafe ụzọ site na ụlọ ndị kachasị mkpa na Scotland ma bịarukwuo nso, n'ezie, na Loch Ness. Scotland nwere ọtụmọtụ dị ịtụnanya, mana anyị ga-eburu n’uche na anyị ga-eyiri uwe ọkụ, maka ihu igwe dị oyi na mpaghara ahụ.
La quintessential Portuguese obodo bụ bohemian ebe pụrụ iche. Bịakwute obodo ebe ị nwere ike ịnụ fado ama ama bụ nnukwu atụmatụ maka izu ụka. Offọdụ n'ime nleta ndị a ga-eme gafere nke mara mma Torre de Belem, Castle nke San Jorge, ebe obibi ndị mọnk Jerónimos ma ọ bụ Plaza del Comercio. Anyị ga-anọ ọpụrụiche pụrụ iche na ngwụcha izu iji chọpụta agbataobi dị ka Chiado.
Ọ na-amasị anyị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obodo niile nke Italiantali n'ihi na e nwere ọtụtụ ihe ịhụ na ha nwere ihe ncheta na okporo ámá ndị mara mma, na mgbakwunye na ihu igwe na-adịkarị mma. Milan zuru oke maka ngwụsị izu, ebe ọ bụ na a naghị ahụ anya karịa obodo ndị dị ka Rome. Gị dị oké ọnụ ahịa katidral ma ọ bụ duomo, Galleria Vittorio Emanuele II ma ọ bụ Sforzesco Castle bụ ụfọdụ isi ihe ncheta na nleta ya.
Nke a bụ ezigbo obodo Europe, n'ihi ya, ọ dịkwa ka ezigbo nzọ maka izu ụka izu ụka ihunanya. Seehụ obodo ị nwere ike gafere Charles Bridge. Na mgbakwunye, ị ga-ahụ nnukwu ụlọ na Prague Katidral, abụọ ịrịba ncheta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihunanya izu ụka getaways